Mombamomba ny orinasa - Noelson Chemicals Technology Co., Ltd.
Tazomy ny fampanantenanao ary miasa amin'ny lazanao
no antony manome anarana ary ny foto-kevitra mandrakizay!
■ Noelson Chemicals dia mpanamboatra sy mpamatsy akora simika miavaka feno. Nanomboka ny taona 1996, Noelson Chemicals dia nanambola sy nanangana ny orinasam-pamokarany any anaty tanin'i Shina, toa ny Noelson Micro-powder Industry Inc., Noelson Chemicals (Nanjing) Co., Ltd. Noelson Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. Noelson Chemicals Technology Co., Ltd. arakaraka ny fenitry ny teknolojia mitarika ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny famatsiana vokatra isan-karazany miaraka amin'ny fenitra manerantany eto an-toerana, ary koa masoivohon'ny vokatra marika marika iraisam-pirenena malaza sasany. Ny foto-kevitray serivisy tokana misy pigment antirust manokana sy vokatra conductive & antistatic agents, dia nahazo ny toeran'ny mpitarika indostrialy.
■ Noelson Chemicals dia mandray ny fanahin'ny fiaraha-miasa ho toy ny ain'ny orinasa, manasa izahay ary miara-miasa amin'ireo andrim-pikarohana matihanina maro ao anatiny sy ivelan'ny firenena, manangona ny olona manana fahaiza-manao, mifantoka amin'ny sisin-tany vaovao farany mitondra ny vovo-micro sy vovoka miasa , manohy mizaha, mamolavola ary mamorona ireo vokatra andian-dahatsoratra maro-asa vaovao.
■ Ny faritra fampiharana ny vokatra Noelson Chemcial dia mandrakotra firakotra, ranomainty, plastika, fingotra, akora fananganana ary orinasa metllurgy, ho an'ireo orinasa maro firenena sy firenena maro:
Noelson Chemcial andiam-pamokarana maro isan-karazany, ny làlana dia madiodio, ny fifantohana kendrena, ny matihanina, ny varotra ary ny varotra dia manana anjara asa lehibe manerantany, ampahany amin'ny vokatra fanondranana no lohalaharana ao amin'ny faritra Sina sy Azia-Pasifika, no mpanamboatra manokana indrindra. ny vovoka bitika sy ny pigment an'ny olona any amin'ny tanin'i Shina ankehitriny.
■ Ny kalitao tsara indrindra sy ny serivisy tsara indrindra dia tenin'i Noelson Chemicals. Ny vokatra rehetra ao amin'ny Noelson Chemicals dia amboarina ary omena amina fenitra faran'izay tsara, vokatra kendrena sasany mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena mifandraika (toy ny fenitry ny American Engineer Association Association, ny fenitry ny American American, ny fenitra RoHS iraisam-pirenena sns.) Momba ny famokarana sy ny famatsiana, koa nahazo ny taratasy fanamarinana ISO9001 / 2008 sy Vondrona Eropeana. Nandritra ny taona maro, Noelson Chemicals dia miara-miasa amin'ny SGS, PONY ny fikambanana manandanja fahefana manerantany ho an'ny antoko fahatelo, mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra mba hampiorina tsara sy hahatratra ny fenitra iraisampirenena. Noelson Chemicals dia manana biraon'ny sampana sy masoivoho any Japon, Eoropa, Etazonia ary tanàna lehibe any Shina, manome serivisy ara-teknika sy raharaham-barotra feno sy tsara ho an'ny mpanjifa rehetra.
■ Teknolojia fanavaozana no fototry ny fampandrosoana tsy tapaka ny Noelson Chemicals. Nandritra ny taona maro, Noelson Chemicals dia nanohy namolavola teknika ambony indrindra ho an'ny vokatra simika vovoka, amin'ny lafiny iray dia mifanakalo fifanakalozana amin'ny orinasa malaza eran'izao tontolo izao izahay, nametraka ny fifandraisana iaraha-miasa maharitra, manara-maso ireo teknisiana vaovao indrindra avy any ivelany, mampahafantatra ny patanty iraisam-pirenena farany; Etsy ankilany, nanangana fifandraisana iaraha-miasa akaiky amin'ny oniversite manan-kaja nasionaly sy andrim-pikarohana matihanina isan-karazany izahay, vovo-tany lehibe ary foibe fikarohana fitaovana vaovao, laboratoara simika lehibe nasionaly. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, mamorona andian-tsarimihetsika pigment vaovao izahay, andiana pigment antirust compound, andiam-pigment phosphate ary serivisy conductive ary andian-tsarimihetsika vokatra vaovao, mamorona ampahany amin'ny banga tsy misy tsena, ary koa ireo singa fototra an'ny Noelson Chemicals mipetraka tsy tapaka amin'ny toeran'ny mpitarika ao amin'ny indostria.
■ Tombony amin'ny vidiny, indraindray manan-danja mitovy amin'ny haitao ihany koa. Omeo ny vidiny mifaninana indrindra, ny tanjona maharitra ho an'ny Noelson Chemicals. Ny rafitry ny fitantanana rojom-bidy mahomby, ny haben'ny famokarana sy ny fahafaha-mamatsy, ny famoronana vokatra tsy manam-paharoa hanampiana ny mpanjifa amin'ny fihenan'ny vidiny ary hanatsara ny fifaninanana vokatra.